Android အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဖုန်းခေါ် Apps ကပ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
2019 အတွက် Android အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဖုန်းခေါ် Apps ကပ
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » 2019 အတွက် Android အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဖုန်းခေါ် Apps ကပ
ကျနော်တို့ကြိုးဖုန်းတယ်လီဖုန်းအားလုံးပေမယ့်အတိတ်၏အရာဖြစ်လာခဲ့သည်ကြတဲ့အချိန်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ အင်တာနက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်နေရာတိုင်းဒီတော့အလွယ်တကူဖြစ်ခြင်းနှင့်စမတ်ဖုန်း၏စျေးနှုန်းထဲမှာကျဆင်းခြင်းကြောင့်သာသင့်ရဲ့အဖွားအိုနေဆဲကြိုးဖုန်းဖုန်းကိုအသုံးပြုဆိုပါတယ်နိုင်ပါသည်။ သူကတောင်သည်ဤဟာ android နဲ့ပြောနေစရာမလိုဘဲဝင် အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု app ကို့သင်တစ်ဦးတည်ငြိမ်သောကို Wi-Fi သို့မဟုတ် 3G အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ android ဖုန်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ app များကိုအတူဘယ်နေရာကနေမဆိုအဆမဲ့အခမဲ့ဖုန်းခေါ်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်နေဆဲ, တကအသေးစားအဆင်မပြေဖြစ်စေ။
နည်းပညာ၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူ Android အတွက်အချို့သောအကြီးအခမဲ့အင်တာနက်ခေါ်ဆိုမှု app များကိုသင်ရုံဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ကြောင်းရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဆိုရင်သင်သည်အဘယ်သူကိုမျှရန် (အသံဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု), စာသားချက်တင်, ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, စကားပြောဖို့ပိုပေးဆောင်စိုးရိမ်ရန်မလိုပါနဲ့ သင့်ရဲ့အဆင်ပြေမှာပါသုံးပါ။
ကပြောသည်ခံရကြောင်း, ကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးအခမဲ့ဟာ android ခေါ်ဆိုမှု app များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းသို့ငုပ်ကုန်အံ့:
အဆိုပါအရေအတွက်သည်တဦးတည်းအစက်အပြောက်ဟာအံ့သြဖွယ် WhatsApp ကိုသှားဖို့ရှိပါတယျ, ဒီအစွမ်းထက်ဟာ android အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု app ကိုအမှန်တကယ်စာသားသာ app ကိုအဖြစ်စတင်ခဲ့ပေမယ့်အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်ပင်အခမဲ့ video chat ခွင့်ပြုထားတဲ့ app ကိုစရင့်ကျက်ထားပါတယ်။ ဒါဟာသင် app ကိုအသုံးပြုသည်ပေမယ့်ဒီ app ကယ့်ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်ကတည်းကပြဿနာတစ်ခုရှိုးမနေသင့်ကြောင်းဖြစ်တည်မှုအတွက်ရေပန်းအစားဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းကသူကိုအခြားသူတစ်ဦးနှင့်အတူချိတ်ဆက်နေလျှင်သင်သာအခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ဒီ app ကိုသုံးနိုင်သည်ကြောင်းမှတ်သားရပါမည် နှင့်သင့် chat နဲ့ခေါ်ဆိုမှုအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ရှိပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ် ဤနေရာတွင်အခမဲ့ Android အတွက်
Facebook မှာ app တွေအကြောင်းကိုဝါကွှားဖို့ဘာမျှမဖြစ်ကြပေမယ့်လုံးဝနီးပါးလူတိုင်းဤသည်နေ့ရက်ကာလကို Facebook ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်တစ်ဦးတည်းကအခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် apps မှကြွလာသောအခါသူကထိပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, Facebook Messenger အနေနဲ့ပေါင်းစပ် text messaging ဝန်ဆောင်မှုဒါပေမယ့်လည်းအင်္ဂါရပ်တောင်းဆိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသံနှင့်ဗီဒီယိုကိုရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ android ဖုန်းပေါ်မှာရှေ့မှောက်အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ဒီ app ကိုသုံးပြီးများအတွက်တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင် althogh သင်နားမထောင် / မခေါ်လိုသောဆန္ဒရှိလူတစ်ဦးနှင့်အတူ Facebook ကသူငယ်ချင်းများကိုဖြစ်ကြောင်းကိုပင်ကြောင့်မလိုအပ်ပါဘူး။ အိုးကလည်းသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်နှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်သည့်အချို့သောဂိမ်းရှိပါတယ်။
Viber ကိုများစွာသော apps များအဖြစ်, ထွက်ဒီနေရာကိုနှိမ့်ချစခဲ့ပေမယ့်ထိုအရပ်မှစကားသံကိုစကားပြောခန်း, စာသားကို chat နဲ့ပင် video chat အပါအဝင်န်ဆောင်မှုတစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ပူဇော်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးသို့တီထွင်ခဲ့သည်။ သင်တို့သည်လည်းအသုံးပြုသူမည်သူမဆိုမှဒီ app တွေနဲ့အခမဲ့ဖုန်းခေါ်နိုင်ပါတယ်။ သင် app ကိုအသုံးမပြုတဲ့သူ peple ဆက်သွယ်လိုလျှင်, ဒါပေမယ့် app ကိုကိုယ်နှိုက်ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက Skype ကိုဆင်တူ, သင်ကအသေးစားကြေးပေးဆောင်နိုင်, သောနီးပါးမလိုအပ်လည်းမရှိ။ ဒါဟာအစသင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုရန်လျှင်အလွန်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည့်ဝှက်ထားသောမက်ဆေ့ခ်ျပို့ကဲ့သို့အခြား features တွေ, ၏စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူကြွလာ။ အဲဒီမှာပျော်စရာများစွာကိုလည်း In-app ကိုဝယ်ယူနိုင်သည့်ရယ်စရာစတစ်ကာများ, GIF များနှင့်တူ, တူ၏ features လည်းဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့အဲဒီကအရမ်း optional ကိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုမမေးလျှင် - မလိုအပ်။
ဤနေရာတွင် Download Android အတွက်အခမဲ့
အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ Android device ကိုစစ်မှန်တဲ့အင်တာနက်ကိုဖုန်းကလုပ်ပါ။ နှောင်ကြိုးမဲ့။
Talketone သင်တစ်ဦးလေယာဉ်ပေါ်မှာပင်အခါ, ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမခေါ်နဲ့ chat ဖို့ Facebook သို့မဟုတ် Google အကောင့်နှင့်အတူန့်အသတ်ကိုအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆို, Facebook နှင့် GTalk မိတ်ဆွေများမျှဝေစာသားများနှင့်ရုပ်ပုံ, ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန် / Canada.Login အတွက်မဆိုဖုန်းနံပါတ်ကမ်းလှမ်းသို့မဟုတ် ပြည်ပမှာခရီးသွားလာ။
သငျသညျမြောက်အမေရိကအတွက်ပုံမှန်ဖုန်းနံပါတ်မှလုံးဝကိုအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့် SMS ကိုရှိသည်ဖို့သင်၏ Google Voice ကို canConfigure ။
ပုံကိုမျှဝေခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါပေမယ့်မှသာလည်း Talkatone ကိုအသုံးပြုဖို့သူအသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဖြစ်ပါတယ်။
Wi-Fi သို့မဟုတ် 3G / 4G ကျော်•အခမဲ့ဖုန်းခေါ် / စာသားများ *
•ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖုန်းနံပါတ်မလိုပဲ Facebook ကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူခေါ်ဆိုမှုများနှင့်စာသားများ
• Universal လိပ်စာစာအုပ်
•အမြင့်ဆုံး-rated ဖုန်း app
• 24 နာရီအတွင်းမယှဉ်နိုင်တဲ့အခမဲ့ထောက်ခံမှု။
Skype ကိုအဲဒီမှာအထဲက apps လူကြိုက်အများဆုံးအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏အမာခံများအင်္ဂါရပ်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ကွန်ပျူတာများ, တက်ဘလက်များနှင့်အများဆုံးကိုအခြားကွန်ပျူတာကိရိယာများပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ Skype ကိုကိုအသုံးပြုဖို့သူအအခြားလူများထံသို့အခမဲ့စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ, အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်ဖုန်းနံပါတ်များကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်သုံးစွဲဖို့ခရက်ဒစ်များအတွက်ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ Skype ကိုအကောင့်နှင့်အတူလူများ၏တန်ချိန်သော်လည်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာအခမဲ့သူများဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရန်ခက်ခဲဖြစ်သင့်ပါဘူး။
သငျသညျအရေးပါသူကိုလူတို့နှင့်အတူထိတွေ့နေပါ။ တန်ဂိုကအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူ messaging app ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ခေါ်ဆိုမှုအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ တန်ဂိုစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တန်ဂိုအပေါ်သန်း 350 ကျော်ကလူ Join!
· BEST video call - တန်ဂိုကပထမနဲ့ app ခေါ်ဆိုကိုအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်, ဒါကြောင့်သင်အမြဲဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာသင့်အတွက်အရေးပါသူကလူမခေါ်နိုင်ပါ။ သူတို့ရဲ့အသံကိုကြားအပေါင်းတို့နှင့်တကွအခမဲ့များအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏မျက်နှာကြည့်ပါ။
·အင်္ဂါရပ်အားလုံး - အခမဲ့တန်ဂိုအပေါ်စာသား, စတစ်ကာများ, ဓါတ်ပုံများ, ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်တည်နေရာမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါနှင့်လက်ခံရရှိသည်။ အခမဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာအသံဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ပါ။ တန်ဂိုစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
· FUN - ရုံကဗီဒီယိုကိုမခေါ်ဆိုခသလားဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအနေဖြင့်ပျော်စရာရှိသည်။ စတစ်ကာများ Send, filter များပေါင်းထည့်ခြင်း, ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ဂိမ်းအားလုံးအနေဖြင့်ကစား။ သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူစတစ်ကာများ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ကစားဂိမ်း Send
LINE ပိုမိုနီးကပ်စွာသင့်မိသားစု, သူငယ်ချင်းနှင့်ချစ်ရသူ-အခမဲ့ရန်သင့်အားဆောင်ခဲ့ဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းဆက်သွယ်ရေး reshapes ။ အသံနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု, မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စတစ်ကာများတစ်အဆမဲ့အမျိုးမျိုးနှင့်အတူသင်တတ်နိုင်သမျှထင်ဘယ်တော့မှမဖွင့်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသန်း 600 ကျော်အသုံးပြုသူများသည်နှင့်အတူ, LINE အဆက်မပြတ်ပလက်ဖောင်းချဲ့ထွင်မယ့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအသစ်များကိုအတွေ့အကြုံများနှင့်အဆင်ပြေများကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီ app ကိုသုံးပါနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် Android device ကိုယနေ့ကနေအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ပါစေ။
အဲဒီမှာသူကရှေးရှေးကျနော်တို့အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးစဉ်းစားပါအခမဲ့ဟာ android ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် apps များစာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်ထင်လျှင်, ဤ app များကိုသင်တို့အဘို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သင်အတိတ်၌သူတို့အသုံးပြုသောနှင့်အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုအဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုရှာနေကြသည် သင့်ရဲ့ android ဖုန်းပေါ်မှာဝန်ဆောင်မှုကိုသင်အများကြီးပို apps များရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
ပိုပြီးဘို့ငါတို့ပင်မစာမျက်နှာသို့သွားရောက် android app များကို apk